संविधान कार्यान्वयनका चुनौती
03 May 2016 मङ्गलबार २१ बैशाख, २०७३
नरेन्द्रज‌ंग पिटर नरेन्द्रज‌ंग पिटर राजनीतिमा विश्राम त हुँदैन् तर एउटा कोर्स पूरा भएर अर्काको थालनी भने हुन्छ। त्यस्तै संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएर त्यसको कार्यान्वयन भनेको राजनीति संक्रमणको चरमोत्सर्गबाट अर्को खण्डमा फड्को मार्नु होे। द्वन्द्व व्यवस्थापन र विकासको शान्तिमार्गमा बढ्नु पनि हो। विस्तृतमा पढ्नुस्
मामाट्स बादलको उत्पत्ति
मणिरत्न शाक्य मणिरत्न शाक्य गत वैशाख ६ गते सोमबार अपराह्न काठमाडौंको आकाशमा एक किसिमको अनौठोखालको बादल देखा पर्योभ जुन सामान्यतया अरु बेला देखा पर्ने गर्दैनथ्यो। आकाशमा धब्बा, धब्बा वा पोका पोका झुन्डिएर रहेको जस्तो देखा पर्ने बादलले सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गरेको थियो । विस्तृतमा पढ्नुस्
भीमलाल लामिछाने भीमलाल लामिछाने विक्रम संवत् २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपालीको औसत आयु २७ वर्ष थियो। अहिले २०७२ सालको लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा त्यो बढेर ७० वर्षभन्दा बढी पुगिसकेको छ। तर नेपालका सरकारी कर्मचारीको उमेर हदचाहिँ २००८ सालमा ६०–६३ कायम गरिएकामा अहिले घटाएर ५८ मा झारिएको… विस्तृतमा पढ्नुस्
सम्पादकीय सम्पादकीय देशभर पानीको हाहाकार छ । पहाड होस् वा तराई, सबैतिरका बासिन्दा पिउने पानीसमेत नपाएर तड्पिरहेका छन् । खेतीपातीका लागिमात्र होइन, पिउने पानीसमेत अभाव छ । मधेस, भित्री मधेस र पहाड सबैतिरका बस्तीमा पानी अभाव छ। विस्तृतमा पढ्नुस्
मानिसकै काँध चढ्दासम्म
डा. देवीप्रसाद सुवेदी डा. देवीप्रसाद सुवेदी 'नागरिक'को वैशाख २०७३ को हृदयस्पर्शी सम्पादकीय महानगरका 'मनु मित्र' ले मन झस्काएपछि केही लेख्न कुत्कुत्यायो। वस्तुतः सभ्यताको आदिम अवस्थामा आफैं पशुतुल्य मानिसले आफु सभ्यताको चरम चुलीमा पुगेको अवस्थामा अत्यन्त संवेदनशील पशुभित्र कुकुरप्रतिको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नसकेको कुरा कटु यथार्थ हो। विस्तृतमा पढ्नुस्
राजु नेपाल राजु नेपाल देशको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ६० वर्षे यात्रा पूरा गरको छ। पूर्ण नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा खुलेको यो बैंकले अहिलेको खुला अर्थतन्त्रको स्थितिसम्म आइपुग्दा धेरै आरोह/अवरोह पार गरेको छ। विस्तृतमा पढ्नुस्
आठ वर्षपछिको नेपाल
दीप सिलवाल दीप सिलवाल करिब आठ वर्षपछि यही वैशाख पहिलो साता नेपाल फर्किएँ । यसबीचमा निकै फेरबदल आएछन्। कुरा सुरु गरौँ, इन्धनबाटै भारतले नाकाबन्दी खोलेको यतिका समय भइसकेकाले यो समस्या हटेको मेरो सोच नेपाल ओर्लंदासाथ पम्पहरुमा देखिएको लाइनले गलत सावित गर्यो। विस्तृतमा पढ्नुस्
बजेट आकारको खेल
सम्पादकीय सम्पादकीय राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब ९ अर्बको सिलिङअनुसार सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा व्यस्त छ। विभिन्न मन्त्रालयले भने यसपटक पनि १५ खर्बभन्दा बढी बजेट माग गरिरहेका छन्। यसरी हचुवामा बजेट माग गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई… विस्तृतमा पढ्नुस्
दिगो विकास, जनजीविका र शासन
डा.योगेन्द्रराज रिजाल डा.योगेन्द्रराज रिजाल दोस्रो विश्व युद्ध समाप्तिसँंगै विश्व समुदाय सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि योजनाबद्धरूपमा अघि बढ्यो। तत्पश्चात विज्ञान प्रविधिका साथै औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा निकै उपलब्धि भए। युद्धले ध्वस्त कतिपय मुलुकले आफ्ना नागरिकको आर्थिक–सामाजिक जीवनमा चामत्कारिक परिवर्तन ल्याउन सफल भए। अहिले विकासित र विकासशील… विस्तृतमा पढ्नुस्
बाबुकाजी कार्की बाबुकाजी कार्की यस वर्षको एसएलसीमा सम्मिलित ६ लाखभन्दा बढी परीक्षार्थी अहिले बेरोजगार जस्तै छन्। एक शिक्षण संस्थाबाट विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरी अर्को तहमा प्रवेश गर्न खुट्टा उचालेका यिनीहरुमा आगामी शिक्षा र शिक्षण संस्थाबारे कौतुहलता हुनु स्वाभाविकै हो। तसर्थ दश वर्षभन्दा बढी… विस्तृतमा पढ्नुस्
StartPrev…NextEndPage 13 of 508	भर्खरै...